စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 27/12/2019)
လာမည့်ဟော်လန် Tulip ရာသီအဘို့သင့်ခရီးစဉ်စီစဉ်
ဟော်လန် Tulip ရာသီတွေအများကြီးဆွဲဆောင် ခရီးသွားဧည့်များနှင့်ဧည့်သည်များ သူတို့ဖွင့်သည့်အခါဥယျာဉ်နှင့်နှင်းပန်းလယ်ကွင်းသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်များကိုမကြာခဏဖြစ်ပြီးသူတို့ပိတ်လိုက်နာရီအနည်းငယ်မတိုင်မီ. သင်တို့သည်ငါတို့၏ထဲကအများဆုံးလုပ်နိုင်အောင်အညီသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ် အတှေ့အကွုံ နှင့်လူအစုအဝေးမရှိဘဲအချို့အကြီးအဓာတ်ပုံများရနိုင်.
အဆိုပါ tulips ကြည့်ဖို့လာမယ့်လူဦးရေကြောင့်, ရထားဟော်လန် Tulip ရာသီကြုံနေရမဟုတ်ဘဲအလုပ်ရှုပ်နိုင်ပါတယ်. ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ရှေ့ဆက်စီစဉ်ဖို့အရေးကြီးတယ် နှင့်သင့်စာအုပ်ဆိုင် ရထားလက်မှတ်တွေမတိုင်မီ-လက် တတ်နိုင်သမျှသင်တို့အပေါ်မှာရနိုင်ကြသည်ကိုသေချာနှင့်အံ့မခန်းအမြင်များကိုခံစားဖို့.
သငျသညျနည်းပါးလာ tulips အတူနေရာပေမယ်နည်းပါးလာလူအစုအဝေးနှင့်အတူအနည်းငယ်မှာရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင် စျေးနှုန်းချိုသာစျေးနှုန်းများ ထို့နောက် Flevoland သင်တို့အဘို့ဖြစ်ပါသည်. သင်ကဖမ်းနိုင်ပါတယ် အမ်စတာဒမ်ကနေကဒီမှာရထား သငျသညျအထွတ်အထိပ်နာရီအကြာတွင်ကြောင့်ဖမ်းမယ်ဆိုရင်နှင့်သင်ဆောင်ကြဉ်းနိုင်ပါလိမ့်မယ် စက်ဘီး ရထားပေါ်မှာ, သောနှင်းပန်းလယ်ကွင်းန်းကျင်သင်သည်တတ်နိုင်သံသရာဆိုလိုတယ်. ခရီးတလျှောက်တွင်ထိုအမြင်များ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ကြပြီးအလွန်ကြီးစွာသောများများရှိပါတယ် ဓာတ်ပုံကိုအခွင့်အလမ်း.
သင့်ရဲ့ခံစားကြည့်ပါ ရထားခရီးစဉ်, သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင်နေရာအများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောမှတဆင့်, တစ်ဦးကရထား Save If you need other ဥရောပရထားလက်မှတ်တွေ, ဒီနေရာမှာပဲ click နှိပ်, go to our website and enjoy the ride.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fholland-tulip-season-by-train%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
ရထားခရီးသွား ခရီးသွား travelholland netရာဝတီ traveltips နှင်းပန်း